Nzukọ Nnọkọ Mgbasa Ọha na Ọha | Nzukọ Na-adịghị N'ịntanetị | Ọnwa Isii 23, 2021 | Martech Zone
N'adịghị ka webinars ọdịnala, Nzukọ Nnọchite na-aga na-eche dị ka ndị na-onye ihe ndị anyị na-atụ uche. Site n'inwe ike ikwu okwu ihu na ihu na ndị ọkà okwu mgbe ha kwusịrị okwu, ruo nzukọ na nkata na ndị ọzọ bịara, a ga-enwe ọtụtụ ohere maka kpokọtara oge. Ndị a bụ ole na ole n'ime isiokwu a:
Etu ị ga-esi wuo sistemụ ire ahịa maka ụlọ ọrụ gị - Soro Lee Goff ka ọ na-ekpuchi ogidi 4 nke usoro ire ahịa na-aga nke ọma. Ya usoro ga-okpukpu abụọ gị na-edu, ekwe nkwa ọ dịghị ụzọ mgbe ada site cracks, nye zuru ezu pipeline management, uzo KPI si n'ime arụmọrụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ une Akụ dị ka ọ na-aga na-nkọwa na 4 ogidi na otú ha nwere ike ịgbanwe ahịa gị n'ụlọnga .
Etu ị ga - esi were ọnụ ọgụgụ gị - Jason Swenk ga - egosi gị etu ị ga - esi nyochaa onwe gị ọkwa nke ụlọ ọrụ gị, yana ihe ị ga - eme na nke ugbu a na nke ga - eme n’ọdịnihu iji bulie ụlọ ọrụ gị ngwa ngwa ka ị nwee ike iru nzukọ ahụ.
Etu esi agba ọsọ & jikwaa ihe ịma aka maka ndị ahịa - Kelly Noble Mirabella na-eduga nnọkọ nnọkọ a ebe ọ ga-egosi gị usoro maka ịgba ọsọ nsogbu dị ka ụbọchị ole na ole ma ọ bụ ogologo oge otu ọnwa. ọ dị mfe ịmepụta ihe ịma aka dị ịtụnanya nke ga - eme ndị na - eso ụzọ gị ma mee ka ha laghachitere ọzọ ma ọ bụrụ na ị maara usoro ahụ. Ọ dịkwa mfe nke na onye ọ bụla nọ na ụlọ ọrụ gị nwere ike ịme ya - ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị bụghị onye maara ihe! Ọzọkwa, Kelly ga-eso gị kerịta ihe ịchọrọ iji chọta ndị na-akwado ya (ọ bụrụ na ịchọrọ ha), hazie atụmatụ ya, yana akụ niile ịchọrọ iji mee nke ọma.
Etu esi ejikwa eserese maka otutu ndị ahịa - Anyị niile maara oge ole ọ na - ewe iji mepụta eserese maka otu akara. Ma gịnị banyere mgbe ị na-ejikwa ọtụtụ ụdị? O nwere ike ịbụ ihe ịma aka iji nọgide na-anọgidesi ike ma na-anọ n'elu ihe osise chọrọ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ntanetị na ntanetị. Na nnọkọ a, Annette McDonald ga-agagharị na-arụ ọrụ ị nwere ike ịtọlite ​​iji mee ka ụlọ ọrụ gị nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma, yana ịba ụba, site na inye ndị otu ọ bụla ikike ijikwa ike ịmepụta ọdịnaya dị egwu maka ndị ahịa gị niile. !
Etu esi emeghe usoro iji bulie gị n'ụlọnga - Kedu ihe ndị na-eme ihe dị elu na-eme n'ụzọ dị iche iche iji bulie ụlọ ọrụ ha? Ọbụghị naanị 'kedu' mana 'kedu' ka ha si eme ya, kwa afọ, nkeji iri na ise na ọnwa n'ọnwa. A ga-ekpughe usoro na usoro achọrọ Robert Craven. Na ihe ijuanya na nke a abụghị ihe sayensị rọketi ma ọ bụ nkwupụta mara mma nke amamihe. Anyị ga-ekekọrịta ngwaọrụ nke ọtụtụ puku ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ dị elu na-eji.
Etu esi edozi nkwekọrịta ndị ahịa & Iwu nwebisiinka - Dịka onye nwe ụlọ ọrụ, ihe ikpeazu ịchọrọ iche banyere ya bụ nkwekọrịta ma ọ bụ nchegbu gbasara iwu, mana iwepụta oge na-aga n'ihu iji jide n'aka na ị nwere nkwekọrịta ahaziri n'ọnọdụ, ma na-edebe iwu iwu nwebisiinka ọhụụ dịka ha metụtara na mgbasa ozi mgbasa ozi, nwere ike inye aka kpuchido gị n'okwu dị oke ọnụ n'okporo ụzọ. N'ime nnọkọ a juputara na ozi a, ị ga-amụta site na onye ọka iwu na-achọsi ike, ọkà okwu na onye edemede Mitch Jackson, wee pụọ na nghọta doro anya nke oge ị ga-eji ọrụ na ọrụ gị, ihe ị ga-etinye, yana otu ị ga-esi cheta nke nwebisiinka iwu na ahịa dijitalụ.
Etu esi ejikwa Mgbasa ozi Facebook maka ndị ahịa - Ọ bụ karịa ụkpụrụ ọma. Zere ọnyà ndị nwere ike ime ka akaụntụ ndị ahịa gị ma ọ bụ akaụntụ ụlọ ọrụ gị gbochie mgbasa ozi na Facebook. Mụta otu esi edozi ma nweta akaụntụ Facebook nke onye ahịa gị iji kpuchido gị dị ka ụlọ ọrụ wee debe akaụntụ gị niile n'ọnọdụ dị mma. Soro Amanda Robinson - Digital Gal ma mụta ka esi ejikwa Nhazi azụmahịa, Peeji, Akaụntụ Ad, Pixels, Katalọgụ na ndị ọzọ n'aha onye ahịa.
Genlọ ọrụ: Kedụ ka ị ga - esi mepụta mmeri, data na - adọkpụ ya? - Site na mgbanwe n ’ụzọ ndị ụdị ahịa si eme azụmahịa, ka ịgbanwee elekwasị anya na itinye aka na dijitalụ, COVID-19 meghere ọnụ ụzọ maka nsogbu na ohere maka ụlọ ọrụ na ndị ahịa. Ugbu a karịa mgbe ọ bụla, ụlọ ọrụ na-emezigharị onwe ha iji mezuo mkpa na-eto eto ma na-agbanwe maka mkpa nke ndị ahịa na atụmanya ha. Chọta ohere azụmaahịa ọhụụ, imeri asọmpi na-eto eto, yana ịgbasa ndị ahịa ha bụ ụfọdụ n'ime nsogbu ịma aka nke ụlọ ọrụ na-eche ihu. Yabụ iji merie nsogbu ndị a ma nọrọ n'elu egwuregwu gị, ọ dị mkpa ka ị kwadebe onwe gị na ngwaọrụ ndị nwere ike ịchụ data! Na nnọkọ a, Aurelien Blaha ga - enyere gị aka ịchọpụta otu Digimind Historical Search nwere ike isi nyere gị aka belata oge ị kwadebere maka olulu, bụrụ ihe dị mkpa ma nwee obi ike na nghọta data, ma weta ihe ọmụma ọhụụ ọhụụ na mkpọsa gị na-esote .
Lelee usoro ihe omume niile na oge ezumike na ikwu okwu! Ọzọkwa, enwere ịkparịta ụka n',ntanet, ụlọ ndozi ngwaahịa, na ngosipụta ngwaahịa!
Deba aha maka Agency Summit
ngosi: Douglas Karr bụ onye nnọchi anya nnọkọ maka ndị nhazi ihe omume, Agorapulse, na anyị na-eji njikọ nsuso na mmemme a.
Tags: gị n'ụlọnganzuko ụlọ ọrụagorapulseannette mcdonalddigiminddijitalụ galJason gbagorokelly noble mirabellalee goffmitch jacksonogbako onyonyoRobert na-achọsi ikeelekọta mmadụ mgbasa ozi gị n'ụlọnganzuko ụlọ ọrụ mgbasa ozi mmekọrịtaogbako mgbasa ozi na ntanetị